Zimbabwe: Railways to be placed in private hands
Monday, 08 February 2010 15:15
Written by Martin Zhuwakinyu
The Zimbabwean governments monopoly over the national railway infrastructure could soon come to an end after indications that the National Railways of Zimbabwe (NRZ) is to be sold off.
Read more: Zimbabwe: Railways to be placed in private hands
Bulawayo infrastructure upgrade in pictures
Thursday, 04 February 2010 17:14
Bulawayo, Zimbabwe: See our latest image gallery on progress being made by the Bulawayo City Council.
Read more: Bulawayo infrastructure upgrade in pictures
Zimbabwe has been top rated in the climate stakes according to the 2009 Quality of Life Index issued by International Living.
Read more: Zimbabwe best country in the world for climate
Monday, 25 January 2010 09:36
2010 is the year in which Zimbabwe will come out of its own 'Great Depression.'
Read more: World Bank: Zimbabwe GDP up sharply in 2010
Zimbabwe dry spell prompts Met Office cloud seeding
Tuesday, 05 January 2010 16:46
ZDDT Zimbabwe News: Efforts being made to limit impact of El Nino climate phenomenon on Zimbabwe's 2009 / 2010 rainy season.
Read more: Zimbabwe dry spell prompts Met Office cloud seeding